Swedish Online Casino Sites - Pamhepo Casino Bhonasi Makodhi
(276 mavhoti, avhareji: 5.00 kubva 5)
Loading ... Kubva muna Ndira 2018 ese marudzi ekubhejera zviri pamutemo muSweden. Monopoly mundima iyi ndeyenyika yehurumende Svenska Spel, yakavambwa muna 1997 nekubatanidzwa kwemakambani maviri: Penninglotteriet neTipstjänst. Svenska Spel inoshanda pasi-yakavakirwa makasino munyika, pamwe neiyo chikamu chelotari. Zvinoenderana nemutemo wekubhejera muSweden mukasino iwe unogona kutamba mitambo senge roulette, craps nemitambo yemakadhi, michina yemakiti, poker. Iyo yakasarudzika kodzero yekupa iyi yese mitambo iri yeSvenska Spel. Nezvemitemo, kuchengetedzeka uye kuvimbika kweSweden kubhejera musika ndeyekutarisira manejimendi muSweden.
Parizvino, kubhejera pamhepo muSweden hakuna kutongwa. Hurumende-muridzi monopoly Svenska Spel ane mvumo yekupa online poker uye online bingo. Nekudaro, nyanzvi dzekubhejera dzakazivisa shanduko dzinogona kuitika mumutemo uripo wepamhepo kubhejera muSweden, izvo zvinobvumidza kuunza nzira yekupa marezinesi kune mamwe marudzi ekubhejera online
List of Top 10 Shona Online Casino Sites
Rwendo rwedu nhasi inyika yakapfuma munhoroondo, kunyaradza uye kurongeka - muSweden. CasinoToplists inopa kuona zvinoonekwa, izvo zvakasarudzika uye tsika dzenyika ino yakanaka. Uye, hongu, dzidza zvakawanda nezve makasino uye kubhejera.
Sweden - iyo nzvimbo uye yakati wandei nhoroondo;
yakavakwa zvikuru mumaguta makuru akadai saSundsvall), Malmö, Gothenburg neStockholm, guta guru renyika;
20 makore + apfekodhi.
Nzvimbo shanu muStockholm Sweden ine adresi yeguta guru;
Chokwadi chinofadza pamusoro peSweden uye vanhu varo.
Nzvimbo yeSweden uye imwe yenyaya
Sweden iri kuchamhembe kweEurope kumatunhu ekumabvazuva nekumaodzanyemba kweScandinavia. Kumadokero miganhu iri padyo neNorway, uye kuchamhembe-kumabvazuva - neFinland. Kubva kuDenmark kupatsanura iyo Straits Öresund, Kattegat naSkagerrak.
Kubudirira kwayo iyo nyika yakawana muzana ramakore rechi17, asi haina kukwanisa kuchengeta chinzvimbo chayo chinotungamira nekuda kweNorth War neRussia. Muna 1809, Sweden yakarasikirwa nedzimwe nzvimbo dzayo dzekumabvazuva, ikarasikirwa neyakaitika kuFinland yakavakidzana nayo. Sweden yakagara iri kudivi reGerman uye munhoroondo yese yakaramba ichibatsira hurumende, kusanganisira nguva yechipiri Hondo Yenyika.
Casino uye kubhejera muSweden
MaSweden vanhu vanoshanda uye ini ndinoedza kuwana ese mabhenefiti, kungave kuri marara marara kana mari pakubhejera. Munyika unogona kutamba kuti ufare, asi pasi pekutonga kwakasimba nehurumende. Saka muna 1999, makasino mana akavakwa mumaguta makuru munyika. Sundsvall (yakavakwa zvakare kubva pachivako chemahofisi) , Malmö , Gothenburg uye mumusoro, Stockholm. Iyi ndiyo kasino hombe yenyika «Casino Cosmopol Stockholm». Yakavhurwa nazvino - munaKurume 2003 uye iwe unogona kuiwana pakero Kungsgatan 65. Pano iwe uchakwanisa kutamba muRoulette, pamwe neBlackjack, Caribbean Stud uye Baccarat. Iyo kasino poker makwikwi anoitwa nguva nenguva. Mune poker iwe unogona kutamba zvese pre-yakanyorwa parunhare, uye kujoina pazuva remitambo. Vashanyi vanotarisirwa zuva nezuva kubva 13.00 kusvika 5.00 mangwanani.
Iyo kasino ine zvaisingakwanise: unofanirwa kunge uri makumi maviri kana kupfuura (unoongorora pasipoti yako pamusuwo) uye yunifomu inofanirwa kutevedzera pfungwa ye «smart-casual» (smart casual). Ndokumbira utarise kuti euro haiwanzoshandiswa muSweden, panoshanda mari yayo - Swedish krona.
- Vasa Museum . Museum Kero: Galärvarvsvägen, 14. Iyi miziyamu isina kujairika, uye ngarava yakachengetedzwa kubvira muzana ramakore rechi17. Nenzira, iye oga munyika. 95% yezvose zvakavezwa zvigadzirwa uye zvivezwa zvakachengetedzwa mune yavo yekutanga fomu. Iye zvino chikepe chiri mune chinangwa chakavakirwa musimamende, kwaunogona zvakare kuona firimu nezve chiratidziro (mumitauro gumi nematanhatu).
- Alfred Nobel Museum . Kero: Börshuset, Stortorget, Gamla stan. Pano, mifananidzo yevanokunda mibairo mazana masere haisi yekushongedza madziro chete, uye ichifamba pamhando yemashini mukuchenesa kwakasviba. Iyi dhizaini inonakidza kwazvo kwete chete inobatsira kuchengetedza nzvimbo mumuseum. Asi zvakare zvakare inoyeuka kuti miziyamu yakatsaurirwa kubudirira kwesainzi. Kune zvakare nzvimbo dzekudyidzana uko vakuru vane vana vanogona kudzokorora zvimwe zve ake akasarudzika zviwanikwa.
- "Skansen" Museum. Kero: Djurgardsslatten 49-51. Shanyira yese yeSweden kwemaawa akati wandei mumhepo nyowani? Nyore! Uye izvi zvese nekuda kwemuseum yeSweden tsika "Skansen". Heino imba neiyo dzimba ye18-19 mazana emakore. Panharaunda yenzvimbo dzekuchengetedza miziyamu maartisan ari mubishi nemabasa avo ezuva nezuva, uye iwe unogona kutarisa kuti vagadziri veshangu, vabiki vezvingwa uye vanoputira girazi.
- "Junibacken" Museum. Nzvimbo: chitsuwa cheDjurgarden muStockholm. Iyo miziyamu yenyaya dzinozivikanwa dzaAstrid Lindgren uye paradhiso yevana uye vese vateveri vebasa rake.
Nzira dzinofadza pamusoro peSweden nevaSweden
MuSweden pane vamwe vanopfuura 300,000 vanhu vane zita rinonzi Carlson / Karlsson;
Avhareji vadzidzi veMakore muno - makore makumi maviri nematanhatu;
Iwo mukuru kwazvo mutero - 22% yeiyo purofiti;
MuSweden mune "Ice Hotera" - «ICEHOTEL». Makiromita mazana maviri kuchamhembe kweArctic Circle mumusha weJukkasjarvi iri chairo "hut chando". Yakavakwazve gore rega rega, nekuti iro chete chitubu kubva kuhova chinoramba chiripo. Pano iwe unogona kuve wako kuveza chivezwa chakagadzirwa nechando, enda kune hove hove, uye uve chapupu kune aurora borealis;
"Snus" - iyo yakapfava, yakashatiswa fodya. ChiSweden chakaiswa pasi pemuromo wepamusoro uye chinoshandiswa panzvimbo yefodya yakajairwa;
Iyo inonyanya kufarira dhishi ndiyo kebab pizza (nyama, chizi, mukanyiwa uye muto wakasarudzika wekebabs). Kazhinji, imba yemhuri pachinzvimbo chekudya kwemanheru, inoda kushanyira maresitorendi ari padyo kana cheni yekukurumidza kudya;
MaSweden zana emakore - tarisiro yeupenyu pano yapfuura makore makumi masere (chimwe chezviratidzo zvakanakisa zveEurope yese);
MaSweden anofunga zvakawanda zviwanikwa zvemunyika yake uye kushandisa simba zvine hungwaru. Semuenzaniso, muguta reBorås magetsi kubva kunzvimbo yekupisira anoshandiswa kupisa guta (60,000 dzimba, 10% yesimba rinodiwa). Muchina wekuwachisa hausi zvachose - apa wakashandiswa mukamuri yekuwachisa yakagovaniswa.
Sweden pamepu yeEurope
0.1 Kubhejera muSweden
0.2 List of Top 10 Shona Online Casino Sites
3 Kubhejera muSweden
3.0.1 Nzvimbo yeSweden uye imwe yenyaya
3.1 Casino uye kubhejera muSweden
3.1.2 Nzira dzinofadza pamusoro peSweden nevaSweden
3.1.3 Sweden pamepu yeEurope